Turkménistan: Afaka Ilay Renim-pianakaviana Saingy Mbola Voampanga Foana
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Anglisy Armenianina Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Chichewa Danoà Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Frantsay Grika Géorgien Hiligaynon Holandey Hongroà Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Kikaonde Kinyarwanda Kirundi Koreanina Kroaty Litoanianina Malagasy Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Norvezianina Poloney Portogey Romanianina Rosianina Sepedi Serba Serba (Soratra Romanina) Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tagalog Tiorka Tseky Vietnamianina Xhosa Yorobà Zoloa Éwé
22 SEPTAMBRA 2014
Nafahana Ilay Renim-pianakaviana any Turkménistan
Bibi Rahmanova sy ny fianakaviany
Nivoaka ny fonja i Bibi Rahmanova ny 2 Septambra 2014, tamin’ny valo ora alina, nefa mbola tsy afaka madiodio. Nandinika ny fangatahany hampakatra fitsarana ireo mpitsara tao amin’ny Fitsaram-paritr’i Dashoguz, tamin’io andro io. Marina fa tsy nofoanan’izy ireo ny fiampangana lainga azy. Novan’izy ireo ho sazy mihantona anefa ilay saziny efa-taona an-tranomaizina, * ary nasainy navoaka ny fonja avy hatrany izy. Voalaza tao amin’ilay didim-pitsarana fa nilefitra ny mpitsara rehefa nandinika ny toe-javatra nisy an’i Bibi. Vehivavy mantsy izy, ary manan-janaka efa-taona sady mbola tsy nisy zavatra nahavoarohirohy azy taloha.
Nampakatra fitsarana i Bibi taorian’ny fitsarana azy tamin’ny 18 Aogositra. Nomelohina mantsy izy tamin’io satria nendrikendrehina hoe “nanohitra polisy” sy “nahery setra” taminy. Nosakanan’ny polisy teny amin’ny garan’ny lamasinina any Dashoguz i Bibi sy Vepa vadiny tamin’ny 5 Jolay. Nandeha naka entana izy ireo tamin’izay, anisan’izany ny boky ara-pivavahana vitsivitsy. Nofoanana ny fiampangana an’i Vepa tatỳ aoriana. I Bibi kosa nogadraina ny 8 Aogositra, ary nijaly be mihitsy izy tany am-ponja.
Miharihary ny tsy rariny any Turkménistan
Nilaza ny mpisolovavan’i Bibi, izay tsy avy any Turkménistan, fa olona maro eran-tany no tsy nankasitraka ny fanagadrana tsy ara-drariny an’i Bibi. Mety ho anisan’ny antony nanafahana azy tampoka izany.
Tsy i Bibi irery no Vavolombelon’i Jehovah iharan’izany any Turkménistan. Efa mahazatra an’ireo Vavolombelona any ny hoe tsy hajaina ny zon’izy ireo. Vavolombelona valo no migadra noho ny finoany: Tsy nety nanao miaramila noho ny feon’ny fieritreretany ny enina, ary ny roa voaendrikendrika tamin’ny zavatra tsy nataony. Mijaly be izy ireo any am-ponja sady miaritra herisetra isan-karazany.
Mendri-piderana ireo mpitsara ao amin’ny Fitsaram-paritr’i Dashoguz noho izy ireo nanafaka an’i Bibi. Tsy nahavita nanonitra ny tsy rariny natao taminy anefa izy ireo. Manantena ireo manaja ny zo maha olona fa mba hojeren’ny manam-pahefana any Turkménistan ny tsy rariny hafa mitranga any. Maniry koa izy ireo hoe hampiharina ny fenitra iraisam-pirenena momba ny zon’olombelona ka havela hanaraka ny fivavahany ny olona.
^ feh. 2 Novan’ilay fitsaram-paritra ho sazy mihantona efa-taona ilay saziny higadra efa-taona, ary asaina manara-maso azy mandritra ny telo taona ny polisy. Tokony ho tsara fitondran-tena izy mandritra an’io telo taona io, ary tsy mahazo miala ao amin’ny tanànany raha tsy mahazo alalana avy amin’ny manam-pahefana.
Turkménistan: Gadraina Tsy Ara-drariny ny Renin’ilay Zaza Efa-taona